Agaasimayaasha filimada Isbaanishka, yaa ugu caansan? | I sii wakhti firaaqo
Agaasimayaasha filimada Isbaanishka
Shineemadu waa mid ka mid ah farshaxanka aadka loo tixgeliyo adduunka, oo aan jiri karin iyada oo aan lahayn goob xiise leh. Si kastaba ha ahaatee, In kasta oo aan leenahay sheeko gaar ah oo leh karti weyn, wax badan ma dhici doonaan haddii aan laga maarmin shaqada agaasime. Shaqada agaasimaha filimada ayaa ah inuu duubista duubista sameeyo oo uu noqdo Blockbuster. Shineemada Isbaanishku waxay leedahay hibo badan maantana wax yar ayaan kaaga sheegi doonaa taariikhda agaasimayaasha filimada Isbaanishka ugu weyn waxaan leenahay maanta.
Mid ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan ee agaasimuhu waa inuu wax yar sameeyo wax walba! Asal ahaan wuxuu mas'uul ka yahay inuu si sax ah u fuliyo una qorsheeyo sheeko hab ku habboon dhagaystayaasha. Waa shaxanka sameeya go'aamada ugu waaweyn, tusaale ahaan: fulinta qoraalka, xulashada heesaha dhawaaqa, tilmaamaha jilayaasha, kormeerida toogashada goob kasta iyo xaglaha kaamirooyinka inta lagu jiro toogashada. Laakiin inta badan ku biiriya aragtidiisa sida ay tahay in sheekada loo sheego qodobo muhiim u ah go'aaminta qaabka deegaanka. Hoos waxaan ku soo bandhigayaa saddex ka mid ah agaasimayaasha filimada Isbaanishka ee la aqoonsan yahay si aynaan u lumin aragtida mid ka mid ah filimadooda.
4 Ka warran inta kale ee agaasimayaasha filimada Isbaanishka?
Se tixraac como mid ka mid ah agaasimayaasha ugu saameynta badan meel ka baxsan dalkiisa hooyo tobankii sano ee la soo dhaafay. Wuxuu ku dhashay Calzada de Calatrava sanadkii 1949 -kii qoys ka mid ah muleteriyeyaasha. Wuxuu had iyo jeer ku hareeraysanaa haween ku xeeran, kuwaas oo ah il aad u weyn oo wax ku ool u ah shuqulladiisa. Isagoo siddeed iyo toban jir ah ayuu u wareegay magaalada Madrid si uu u barto shineemada; si kastaba ha ahaatee iskuulka ayaa dhawaan xirnaa. Dhacdadan kama dhigin wax caqabad ku ah Almodovar inuu bilaabo inuu jaangooyo jidkiisa. Wuxuu soo galay kooxaha masraxa wuxuuna bilaabay inuu qoro sheekooyin u gaar ah. Waxay ahayd ilaa 1984 markii uu bilaabay inuu isku muujiyo filimka Maxaan sameeyay si aan ugu qalmo tan?
Qaabkiisu wuxuu baabi'iyaa asluubta reer Spain tan iyo markii uu matalayo xaqiiqooyinka shaqadiisa oo mararka qaar ay adag tahay in la dhexgalo xaaladaha kala -soocidda bulshada. Wuxuu wax ka qabtaa mawduucyo aad u muran badan sida: maandooriyeyaasha, carruurta aan horay u soo bixin, khaniisnimada, dhilaysiga iyo ku -xadgudubka. Haddana marna ma dayaco kii sifo madow oo kaftan ah oo aan laga fiirsan. Wuxuu u tixgaliyay jilayaasha Carmen Maura iyo Penelope Cruz mid ka mid ah jilaayaasha iyo muusikada uu jecel yahay.
Shaqooyinkiisa ugu waaweyn waxaan ka helnaa:
Wax walba oo ku saabsan hooyaday
Maqaarka aan ku noolahay
La hadal iyada
Ubaxa sirta aan ku jiro
Wuxuu ku guuleystey laba Oscars: 1999 -kii waxaa mahad leh "Wax walba oo ku saabsan hooyaday" iyo 2002 -dii qoraalka "La hadal iyada". Intaa waxaa sii dheer, waxaa la siiyay dhowr Golden Globes, BAFTA Awards, Goya Awards iyo xafladda Cannes. Waxaa muhiim ah in la xoojiyo in marka laga reebo noqoshada mid ka mid ah agaasimayaasha filimada Isbaanishka ugu fiican; Sidoo kale waa soo -saare guuleysta iyo qoraa -shaashadeedka.
Iyada oo leh hooyo asal ahaan Isbaanish ah iyo aabbe u dhashay Chile, waxaan ka helnaa agaasimahan laba dhalasho oo uu hayo xilligan. Wuxuu ku dhashay March 31, 1972 Santiago de Chile sannadka ku xiga qoysku waxay go'aansadeen inay u guuraan Madrid. Hal -abuurnimadiisu waxay bilaabatay inay kobciso da 'aad u yar markii uu muujiyey wax weyn jecel qorista iyo akhriska, iyo sidoo kale curinta mawduucyada muusikada. Waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah agaasimayaasha ugu guulaha badan, qorayaasha qorayaasha iyo halabuurrada waqtigeenna ee farshaxanka toddobaad.
ka Amenábar shaqooyinkiisii ​​ugu horreeyay wuxuu ka koobnaa afar filim oo gaagaaban la sii daayay intii u dhaxaysay 1991 iyo 1995. Wuxuu bilaabay inuu caan ku noqdo 1996 soo -saarkii "Thesis", riwaayad soo jiidatay dareenka muhiimka ah ee Bandhig Faneedka Berlin kuna guuleystay toddobada Goya Awards. Sannadkii 1997 wuxuu soo saaray "Abre los ojos", oo ah filim khiyaali saynis ah oo xaaqay xafladaha Tokyo iyo Berlin. Shirqoolku wuxuu ka tagay jilaaga reer Mareykan Tom Cruise oo aad ula dhacay oo go'aansaday inuu helo xuquuqda si uu ula qabsado taas oo la sii daayay 2001 oo cinwaan looga dhigay "Vanilla Sky."
Soosaarka sedexaad ee agaasimaha oo leh dareen weyn ayaa ah filimka caanka ah "The Other" oo ay jileyso Nicole Kidman. kaas oo lagu sii daayay tiyaatarada 2001. Waxay gaadhay qiimayn sare iyo dib u eegis aad u fiican; waxaa sidoo kale loo meeleeyay inuu yahay filimkii ugu daawashada badnaa sannadka ee Spain.
Mid ka mid ah filimadiisii ​​ugu dambeeyay ee uu ku kaashaday agaasime ahaan wuxuu ahaa 2015, oo cinwaan looga dhigay "Dib -u -dhac", oo ay jileen Emma Watson iyo Ethan Hawke.
Qaar ka mid ah cinwaannada kale ee uu ku darsaday agaasime, soo -saare, curiyaha heesaha, ama jilaa waa sida soo socota:
Xumaanta dadka kale
Qofna ma yaqaan qofna
Amenábar waxay taariikhdeeda ku leedahay abaalmarinta Oscar, marka lagu daro tiro badan oo ah abaalmarinta Goya.
Wuxuu ku dhashay 1945 magaalada Barcelona, ​​wuxuu leeyahay walaalo mataano ah wuxuuna ka yimid qoys is -hoosaysiiya. Iwuxuu xirfadiisa mihnadeed ku bilaabay isagoo 20 jir ah isagoo samaynaya xayaysiisyo iyo cajalado fiidyow qaar ka mid ah kooxaha muusikada. Bayona waxay u aqoonsan tahay Guillermo del Toro inay tahay lataliyeheeda oo ay la kulantay intii lagu jiray Bandhigii Filimkii Sitges 1993.
In 2004, qoraaga filimka «The Orphanage» ayaa qoraalkii u dhiibay Bayonne. Markuu arkay baahida loo qabo in la labanlaabo miisaaniyadda iyo muddada filimka, wuxuu kaalmo ka geystaa Guillermo del Toro oo bixiya inuu wada-soo-saaro filimka la sii daayay saddex sano ka dib xafladda Cannes. Farxad ka timid dhagaystayaashu waxay socotay ku dhawaad ​​toban daqiiqo!
Mid kale oo ka mid ah shaqooyinka ugu habboon ee agaasimuhu waxay u dhigantaa riwaayadda «Suurtagalnimada» xiddigta Naomi Watts oo la sii daayay 2012. Sheekadu waxay ka sheekaynaysaa sheeko qoys iyo masiibadii dhacday intii lagu guda jiray bad -gariirkii Badweynta Hindiya 2004. Filimku wuxuu ku guuleystey inuu isu muujiyo inuu yahay horyaalkii ugu guulaha badnaa ee Spain illaa iyo hadda, oo soo xareeyay 8.6 milyan oo doolar intii lagu jiray dhammaadka usbuuca furitaanka.
Intaa waxaa sii dheer, sanadkii 2016 -kii filimka “Bahal weyn ayaa ii imanaya inuu i arko” oo lagu soo bandhigay Spain. Yaabka ugu weyn ayaa yimid markii agaasimaha caanka ah Steven Spielberg wuxuu doortaa Bayona inuu jiheeyo qaybtii ugu dambeysay ee Jurassic World ee 2018: "Boqortooyadii dhacday."
Ka warran inta kale ee agaasimayaasha filimada Isbaanishka?
Shaki la'aan, waxaa jira fannaaniin badan oo soo kordhaya. Waxaan helnay agaasimayaal sida Icíar Bollaín, Daniel Monzón, Fernando Trueba, Daniel Sanchez Arévalo, Mario Camus iyo Alberto Rodríguez kuwaas oo ay tahay inaanan lumin raadkooda. Shaqadiisu waxay bilaabaysaa inay magac ku dhex yeelato warshadaha soo jeedintiisa.
Agaasimayaasha filimku waxay ku tiirsan yihiin miisaaniyad, marka lagu daro xaddidaadaha qaarkood ee dhinaca abuurayaasha sheekooyinka. Haddana shaqadiisu waa laf -dhabarta shaqo kasta oo shaneemo ah. Waa farshaxan run ah in si sax ah loo fasiro loona waafajiyo fikradaha dadka kale si loogu gudbiyo dhagaystayaasha waaweyn loona beddelo guul!
Wadada buuxda ee maqaalka: I sii wakhti firaaqo » General » Agaasimayaasha filimada Isbaanishka
Taxanaha jaceylka ugu fiican